The Nokia 6.2 na 5.2 ga-oru na mara ọkwa omume na June 6 | Gam akporosis
Nokia na-ekwuwapụta ihe omume maka June 6: ekwentị ọhụrụ dị na mmiri
Nokia na-ekpughere ụfọdụ akụkọ na June 6 ọzọ, ụbọchị nke ga - ewe naanị otu izu ma ọ ga - anabata mwepụta gọọmentị nke ekwentị ọhụrụ abụọ.
Ngwaọrụ a na-eche maka emume a abụghị ndị ọzọ Nokia 5.2 na 6.2, mobiles abụọ nke ga-abịa na njirimara, nkọwapụta nkọwapụta teknụzụ na ọnụ ahịa kwesịrị ezigbo etiti, nke ahụ bụkwa ihe ha ga-abụ.
HMD, ụlọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ Finnish, bụ onye ga-arụ ọrụ nke nnabata na mmemme ahụ ekwuputara. Nke a ga-eweta ngwaọrụ ndị ahụ ekwuru, n'agbanyeghị na enweghị nkwenye sitere na nke a. Ya mere, anyị na-atụ aro ka ị kpachara anya banyere enyo, dịka ụdị abụọ ahụ agaghị ahụ ọkụ ebe ahụ, ma ọ ga-ekwe omume na ọ dị otu a.
Hụ ihe na ọkụ ọhụrụ na 06 June 2019.? Nọrọ na-ege ntị na #GaN'iru na ndu. pic.twitter.com/Jy01t9Zyp5
- Nokia Mobile (@NokiaMobile) Nwere ike 30, 2019
Ekwuola ya na mbụ Nokia 6.2 ga-etinye oghere na ihuenyo ahụ, n'otu ụzọ ahụ ọ na-eme Nokia X71, a na-ebugharị ekwentị na-ebido na mbido Eprel na China. Ọ ga-egosipụtakwa igwefoto azụ abụọ na onye na-agụ akwụkwọ mkpịsị aka na ihuenyo, yana ihe nhazi Snapdragon 660. Agbanyeghị, ekwuru na, kama chipset a, ọ ga-akwadebe Snapdragon 632, otu ihe ahụ nwere ike ihe Redmi 7 na Moto G7.
Nokia 5.2, ka ọ dị ugbu a, ga-eji arụmọrụ sistemụ arụmọrụ na arụ ọrụ dị ala karị, dị ka atụmanya ya. Nke a, n'ihi ya, agaghị enwe ogwe osisi nwere oghere, mana ọ ga-enwe ọkwa, nke anyị na-amaghị ma ọ ga-agbatị ma ọ bụ dị ka mmiri mmiri. N’aka nke ya, aga - eji ihe onyonyo foto dị nwayọ nwayọ na ihe ngosi dị ala karịa nke Nokia 6.2. Agbanyeghị, ọ ga-abanyekwa na njirimara dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia na-ekwuwapụta ihe omume maka June 6: ekwentị ọhụrụ dị na mmiri
Egosiputara Meizu 16Xs
Google Pixel 4 ga-asị goodbye na okpokolo agba na ọkwa